Meta Tsananguro: Zvese zvaunoda Kuti Uzive Kune SEO
Chipiri, Kurume 23, 2021 Chipiri, August 24, 2021 Douglas Karr
Dzimwe nguva vatengesi havaoni sango remiti. Sezvo Search Engine Optimization yawana kutarisisa kwakanyanya mumakore gumi apfuura, ndakaona kuti vashambadzi vazhinji vanotarisa zvakanyanya pachinhanho uye inotevera organic traffic, vanokanganwa nhanho inoitika pakati. Majini ekutsvaga akakosha zvakanyanya kune bhizinesi rega rega 'kugona kutyaira vashandisi nechinangwa kune peji pane yako saiti iyo inopa iyo chinangwa kune chako chigadzirwa kana sevhisi. Uye meta tsananguro ndiwo mukana wako wekuwedzera akakodzera kudzvanya-kuburikidza nemitengo kubva kunjini yekutsvaga kuenda kune rako peji.
Chii chinonzi Meta Tsananguro?
Injini dzekutsvaga dzinobvumidza varidzi vesaiti kunyora tsananguro nezve peji rakatsikwa uye rakatumirwa kune injini dzekutsvaga dzavanoratidza mukati mekutsvaga injini peji peji (SERP). Injini dzekutsvaga dzinowanzoshandisa ekutanga 155 kusvika 160 mavara emeta tsananguro yako mhedzisiro yedesktop uye anogona truncate kusvika ~ 120 mavara evashandisi vekutsvaga enjini. Tsananguro dzeMeta hadzionekwe kune mumwe munhu ari kuverenga peji rako, kungoita zvevanokambaira pasi.
Iyo meta tsananguro iri mu chikamu cheHTML uye chakamisikidzwa seinotevera:
<meta zita="tsananguro" gutsikana="Iyo inotungamira indasitiri yeMartech yekutsvagisa, kutsvaga, uye kudzidza mashandisiro ekushandisa nekutengesa uye ekushambadzira mapuratifomu uye tekinoroji kukura bhizinesi rako."/>
Meta Tsananguro Inoshandiswa Sei Mumanyoka?
Ngatitarisei izvi kubva pamaonero maviri akasiyana… injini yekutsvaga uye mushandisi wekutsvaga:
Injini yekutsvaga inowana peji rako, kungave kubva kune yekunze link, yemukati link, kana yako mepu mepu sezvo iri kukambaira padandemutande.
Injini yekutsvaga inokambaira peji rako, ichiteerera zita racho, misoro, nhepfenyuro, uye zvemukati, kuona mazwi akakosha anoenderana nezvako zvemukati. Cherekedza kuti ini handina kusanganisira meta tsananguro mune ino… mainjini ekutsvaga haafanire kuisa iwo mavara mune meta tsananguro kana uchifunga nzira yekunongedzera peji.
Injini yekutsvaga inoshandisa zita reji rako peji rekutsvaga injini ((SERPkupinda.
Kana iwe wakapa meta tsananguro, iyo yekutsvaga injini inotsikisa izvo sekutsanangurwa pasi peSERP yako yekupinda. Kana iwe usina kupa meta tsananguro, injini yekutsvaga inonongedza mhedzisiro nemitsara miviri iyo yavanofunga kuti yakakodzera kubva mukati mezviri mukati peji rako.
Iyo yekutsvaga injini inosarudza maitiro ekumisikidza iro peji zvinoenderana neako saiti kukoshesana nemusoro wenyaya uye kuti mangani akakosha maratidziro ayo saiti yako kana peji rakaiswa pane iwo pamatemu avakakunongedzera iwe.
Injini yekutsvaga gona zvakare chinzvimbo chako zvichienderana nekuti vashandisi vekutsvaga vakatsvaga pane yako SERP mhedzisiro vakagara pane yako saiti kana vakadzokera kuSERP.
Mushandisi wekutsvaga anopinda mazwi akakosha kana mubvunzo pane yekutsvaga injini uye pasi paSERP.
Mhedzisiro yeSERP yakasarudzika, pazvinogoneka, kumushandisi weinjini yekutsvaga zvichienderana nejogirafi uye nhoroondo yavo yekutsvaga.
Mushandisi wekutsvaga anotarisa zita, iyo URL, uye nerondedzero (yakatorwa kubva kutsananguro yemeta).
Izwi rakakosha (s) iro injini yekushandisa yakashandiswa inojekeswa mukati merondedzero pane mhedzisiro yeSERP.
Zvichienderana nemusoro wenyaya, URL, uye tsananguro, mushandisi wekutsvaga anofunga kana kudzvanya pane yako link.
Mushandisi anodzvanya pane yako link anosvika pane rako peji.
Kana iro peji racho riine chekuita uye nemusoro kumusoro kwekutsvaga kwavanga vachiita, vanogara pasiti, vowana ruzivo rwavanoda, uye kunyange vangashandure.
Kana peji racho risina kukodzera uye rinotungamira mukutsvaga kwavanga vachiita, vanodzokera kuSERP vobva vatinya pane imwe peji… pamwe mukwikwidzi wako.
Iwe Meta Tsananguro Inokanganisa Kutsvaga Masosi?
Ndiwo mubvunzo wakazadzwa! Google zvakaziviswa munaGunyana wa2009 iyo meta tsananguro kana meta keywords chinhu muGoogle's chepamusoro algorithms yekutsvaga pawebhu ... asi iwo mubvunzo wakanyatsoda unodawo hurukuro. Nepo mazwi uye mazwi akakosha mukati merondedzero yako yemeta zvisingakwanise kuti uverengerwe zvakananga, zvinokanganisa maitiro evashandisi veinjini yekutsvaga. Uye hunjini hwekutsvaga hunhu hunonyanya kukosha mune chinzvimbo che peji rako kune inoenderana yekutsvaga mhedzisiro.
Icho chokwadi ndechekuti, vanhu vazhinji vanodzvanya -kuenda kune peji rako vanowedzera mukana wekuverenga uye kugovana peji. Izvo zvinowanzoita kuti vaverenge uye vagovane peji racho, zvirinani chinzvimbo chako. Saka… nepo rondedzero dzemeta dzisingakoshese chinzvimbo chepeji rako mumainjini ekutsvaga, zvine simba rakakura pamaitiro evashandisi… chinova ndicho chinzvimbo chekutanga!
Meta Tsananguro Muenzaniso
Heino muenzaniso wekutsvaga, for martech:
Ini ndinoratidza uyu muenzaniso nekuti kana mumwe munhu akangotsvaga "martech", vanogona kungofarira iyo martech, kwete kunyatso kudzidza nezvayo kana kutsvaga bhuku. Ndiri kufara kuti ndiri ipapo kumusoro mumhedzisiro yepamusoro uye ndisinganetseke zvakanyanya kuti kugadzirisa yangu meta tsananguro kunoguma nekuonekwa kukuru.
Side katsamba: Handina peji rakadanwa chii chinonzi martech? Iyo ingangodaro iri zano rakakura kwandiri rekuendesa rimwe sezvo ini ndatove ndakakwirira kumusoro kwetemu ino.
Nei iyo Meta Tsananguro yakakosha kune Organic Kutsvaga Maitiro?
Tsvaga Engine - injini dzekutsvaga dzinoda kupa vashandisi vadzo ruzivo rwepamusoro uye nemhando yepamusoro yekutsvaga. Nekuda kweizvozvo, yako meta tsananguro yakakosha! Kana iwe uchinyatso kusimudzira zvirimo mukati merondedzero yako meta, nyengedza mushandisi weinjini yekutsvaga kuti ashanyire peji rako, uye uchengete ipapo… injini dzekutsvaga dzinonyanya kuvimba munzvimbo yako uye dzinogona kutowedzera chinzvimbo chako kana mamwe mapeji akakwirira-kumusoro achizoita kuti vashandisi vabhadhare. .
Tsvaga Vashandi - yeinjini yekutsvaga mhedzisiro peji ine yakasarudzika mameseji akapinda kubva mukati mezviri mukati peji racho haigone kunyengerera iyo yekutsvaga injini mushandisi kubaya kuburikidza pane rako peji. Kana, kana tsananguro yako isingaenderane nezviri papeji, vanogona kuenda kune inotevera SERP yekupinda.
Kugadziridza meta tsananguro iri chaizvo chakakosha chikamu che-peji SEO nekuda kwezvikonzero zvishoma:
Duplicate Zvemukati - meta tsananguro dzinoshandiswa mukumisikidza kuti unazvo here kana kuti hauna nyora zviripo mukati mewebsite yako. Kana Google ichitenda kuti iwe une mapeji maviri ane akafanana zvakafanana zvemukati uye zvakafanana meta tsananguro, ivo vangangodaro vangango tarisa peji rakanakisa uye voregerera mamwe ese. Kushandisa yakasarudzika meta tsananguro pane peji rega rega ichave nechokwadi mapeji haakwidziridzwe uye kutsunga kuita zvakapetwa zvemukati.
Keywords - Panguva Keywords kushandiswa mu meta tsananguro usatarise zvakananga chinzvimbo chepeji rako, asi ndizvo bolded mune zvekutsvaga mhinduro, kukwevera kumwe kutarisa kumhedzisiro.
Dzvanya-Kuburikidza neMitengo - Rondedzero yemeta yakakosha kushandura mushandisi wekutsvaga injini kuva mushanyi wesaiti yako. Isu tinoshanda nevatengi kuti vaone kuti yavo meta tsananguro dziri kunyengerera zvakanyanya kune yekutsvaga injini mushandisi, nekushandisa kwemazwi akakosha seyechipiri tarisiro. Izvo zvakaenzana neyako pombi yekutyaira mumwe munhu kutora danho.
Matipi Ekuvandudza Meta Tsananguro:
Brevity inokosha. Nekutsvagurudza nhare pakukwira, edza kudzivirira meta tsananguro idzo dzakakura kupfuura zana nemakumi matanhatu pakureba.
nzvenga duplicate meta tsananguro pane yako saiti. Yese meta tsananguro inofanirwa kuve yakasiyana, kana zvikasadaro injini yekutsvaga inogona kuisiya
Shandisa zvinyorwa izvo zvinoita kuti muverengi ade kuziva kana izvo zvinoraira kwavo kuita. Chinangwa apa ndechekutyaira munhu kuti abaye peji rako.
Dzivisa linkbait meta tsananguro. Zvinoshungurudza vashandisi nekuvaita kuti vapinde nepakati uye vasingawane iyo ruzivo iwe yawatsanangura chiitiko chinotyisa chebhizinesi chinokuvadza kugona kwako kuita uye kushandura injini dzekutsvaga.
apo mazwi akadzama hazvisi kuzobatsira zvakananga chinzvimbo chako, asi ivo vachabatsira yako yekudzvanya-kuburikidza chiyero sezvo mazwi akakosha achionekwa semushandisi weinjini yekutsvaga achiverenga zvawanikwa. Edza kushandisa mazwi akakosha padyo nemazwi ekutanga mune rondedzero yemeta.
tarisisa zvese chinzvimbo chako nekudzvanya-kuburikidza mitengo… uye gadzirisa yako meta tsananguro kuti uwedzere akakodzera traffic uye shanduko! Edza kumwe kuyedza kweA / B kwaunogadziridza yako meta tsananguro kwemwedzi uye ona kana uchigona kuwedzera shanduko.
Yako Yemukati Management Sisitimu uye Meta Tsananguro
Kunyangwe iwe uri kushandisa squarespace, WordPress, Drupal, kana imwe CMS, ita shuwa kuti ivo vanokwanisa kugadzirisa yako meta tsananguro. Mune mapuratifomu mazhinji, iyo meta tsananguro yemunda haina kunyatso kujeka saka ungatofanira kuitsvaga. Zve WordPress, Chinzvimbo Math ndezvedu kukurudzira uye inopa mushandisi nekutarisisa kukuru kwetsananguro yemeta sekuonekwa kwidesktop kana nhare.
Nguva imwe neimwe paunoburitsa peji kana kuda kuigadziridza, ini ndinonyatso shandisa meta tsananguro mukati mekuita kuti uwedzere mabhatani ako-kuburikidza nemitero uye kutyaira vashandisi veinjini dzekutsvaga kuburikidza nebhizinesi rako.
Tags: tinya-kuburikidza chiyeronyora zviripoinguva yakareba sei meta tsanangurovangani mavara ndeye meta tsanangurokushandiswa kweshokomazwi akadzamameta tsanangudzometa tsananguro kurebameta tsanangurometa keywordsnyokamatipi ekugadzirisa meta tsananguro
Zano rakakura. Imwe yeanondida maturusi eWordPress All-in-One SEO inotibvumira kuti tigadzire nyore peji tiltes uye tsananguro tisingazive zvakawanda nezve kukodha. (Nenzira, iwe ukatizivisa kuAll-in-One) saka nekutenda pane ese ari maviri kuverenga.
Lorraine, AIOS uye Google XML Sitemaps angu maviri 'anofanirwa-kuva' kune chero WordPress saiti. Ndiri kushamisika kuti WordPress haina kungovaisa mukati mekodhi kodhi panguva ino. WordPress inongowana iwe nezve 75% ipapo…. iwo mapulagi anoita kuti chikuva chako chigoneswe zvizere!
Anotyisa post senguva dzose! Ini ndanga ndichingotaura nezve izvi pakutanga kwesvondo nechikwata. Ndatenda Doug.
Kutenda @jrdorkin: disqus!
Ndingazoshamisika chose kuwana mumwe munhu akakomba nezvekusimudzira yavo yezvinhu pawebhusaiti asina meta tsananguro. Pandinoshanda nevanhu ndinovaudza kuti meta tsananguro ndiwo mutumbi weakashambadzirwa kushambadza paGoogle. Ungaedza here kutengesa chimwe chinhu mupepanhau rako pasina tsananguro yechinhu chacho? Chokwadika kwete!